काठमाडौंमा घर हुने सांसदका लागि दुःखको खबर ! – www.agnijwala.com
काठमाडौंमा घर हुने सांसदका लागि दुःखको खबर !
काठमाडौं , ९ वैशाख – संघीय संसद सचिवालयले काठमाडौं उपत्यकाभित्र घर हुने सांसदहरुको विवरण मागेको छ । काठमाडौं , ललितपुर र भक्तपुरभित्र घर हुने सांसदलाई आफ्नो घर भए सोको विवरण उपलव्ध गराउन सचिवालयले आग्रह गरेको हो ।
सचिवालयले संघीय संसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा)का सांसदलाई आवास सुबिधा बापत महिनामा १८ हजार रुपैयाँ उपलव्ध गराउने ऐनमा व्यवस्था छ । यद्यपि, काठमाडौं घर भएका सांसदहरुले समेत सो रकम लिएको विवरण अनलाइनखबरले सार्वजनिक गरेपछि घर हुने सांसदको विवरण मागिएको हो ।
काठमाडौं मा घर हुने सांसदलाई मर्मत खर्चका रुपमा ९ हजार रुपैयाँ उपलव्ध गराइने र घर नहुने सांसदले भने डेरा भाडा बापत मासिक १८ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । काठमाडौं मा सांसदका लागि १८ हजार रुपैयाँ घरभाडा भने पर्याप्त नरहेको गुनासो घर नहुने सांसदहरुको छ ।
काठमाडौंमा घर हुने सांसदहरुको संख्या कति भनेर अहिलेसम्म पूरा विवरण आएको छैन । सचिवालयले सांसदहरुलाई घरको विवरण स्वेच्छिक रुपमा उपलव्ध गराउन आग्रह गरेको छ ।